My Apple Watch Agaghị Melite! Nke a bụ The Real Idozi. - Apple Watch
kedu ihe ọ pụtara maka nrọ gbasara agụ iyi
iphone se bọtịnụ ụlọ anaghị arụ ọrụ
enweghị akara olu na iphone
My Apple Watch Agaghị Melite! Nke a bụ The Real Idozi.
Apple Watch gị anaghị emelite ma ị maghị ihe kpatara ya. See na-ahụ na mmelite watchOS dị, mana ị nweghị ike ibudata ma ọ bụ wụnye ya. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe kpatara na Apple Watch gị agaghị emelite ma gosi gị otu esi edozi nsogbu a nke ọma !
Etu esi ewelite Apple Watch gị
Dị ka ọ dị, ị na-emelite Apple Watch gị site na ịga na ngwa Watch na iPhone gị na ịme ọpịpị General -> Mmelite ngwanrọ . Ọ bụrụ na mmelite dị, pịa Ibudata na Wụnye .
Otú ọ dị, ọ ga-abụrịrị na ị gbalịrị nke a na ọ bụ ya mere i ji chọọ isiokwu a! Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-enyere gị aka idozi nsogbu ahụ mgbe Apple Watch gị agaghị emelite, ọ bụ ezie na otu dị.
Gbanyụọ Apple Watch ma laghachi na
Enwere obere ohere na obere ọrụ nka bụ ihe kpatara Apple Watch gị agaghị emelite. Site na ịmalitegharia Apple Watch gị, obere ihe omume ya niile nwere ike mechie ma malitekwa ọhụụ mgbe ị gbanye Apple Watch.
kedu ihe 10 pụtara na numerology
Iji gbanyụọ Apple Watch gị, pịa ma jide bọtịnụ Akụkụ ruo mgbe Ike Gbanyụọ ihe mmịfe pụtara na ihu nche. Mia akara ngosi obere ikike site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie Apple Watch gị. Chere ihe dị ka sekọnd 15, wee pịa ma jide bọtịnụ Akụkụ iji gbanwee Apple Watch gị.
Gbaa mbọ hụ Apple ejikọtara na Wi-Fi
Otu n'ime isi ihe abụọ achọrọ maka imelite watchOS na Apple Watch gị bụ na ọ ga - ejikọ ya na Wi-Fi. Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na iPhone ejikọrọ na Wi-Fi, Apple Watch gị ga-ejikọkwa na Wi-Fi kwa ogologo oge ọ bụrụ na e jikọtara ngwaọrụ ndị ahụ na n'etiti onwe ha.
Akpa, jide n'aka na gị iPhone na-ejikọrọ na Wi-Fi site na ịga na Ntọala -> Wi-Fi . Ọ bụrụ na ị hụ obere akara akara na-esote aha netwọk Wi-Fi gị n'elu menu a, iPhone gị ejikọrọ na Wi-Fi.
netflix agaghị ebu ibu na ipad mini
Ozugbo ijide n'aka na iPhone gị ejikọtara na Wi-Fi, gbaa mbọ hụ na iPhone na Apple Watch dị n'etiti ibe ha. Ọ bụ ezie na ejiri Apple 4.0 wuo Apple Apple kachasị ọhụrụ (na-enye ha ihe dịka 200 ụkwụ), ọ kachasị mma ijide Apple Watch gị n'akụkụ iPhone gị mgbe ị na-emelite watchOS.
Jide n'aka na Apple Watch gị nwere 50% Ndụ Batrị
Isi nke abuo achọrọ iji melite Apple Watch bụ na ọ dị mkpa ịnweta ndụ batrị ma ọ dịkarịa ala 50%. Nwere ike ịlele ole batrị gị Apple Watch nwere site swiping elu na ala nke nche ihu. Na nkuku aka ekpe nke ngosipụta, ị ga-ahụ pasent batrị fọdụrụ na Apple Watch gị.
Ọ bụrụ na Apple Watch gị nwere ihe na-erughị 50% ndụ batrị, tinye ya na eriri igwe ndọta ya. You ka nwere ike ibudata ma kwadebe nkwalite watchOS ọbụlagodi na Apple Watch gị nwere ihe na-erughị 50% ndụ batrị.
Ọ bụrụ na ịnwa ịwụnye nwelite nche watchOS tupu ebubo ya ruo opekata mpe 50%, ị ga-ahụ ọkwa dị n'okpuru.
ntutu kacha mma maka akpụkpọ anụ na -acha ọbara ọbara
Lelee Oghere Nchekwa Na Apple Watch gị
Otu n'ime ihe ndị kachasị kpatara Apple Watch agaghị emelite bụ n'ihi na enweghị ohere nchekwa fọdụrụ iji budata mmelite ahụ. Na mkpokọta, mmelite watchOS chọrọ ihe dị ka narị MB (megabytes) nke ohere nchekwa iji budata ma wụnye na Apple Watch gị.
Nwere ike ịlele ịhụ ole ohere nchekwa ọ bụla nyere mmelite watchOS na nkọwa nke mmelite ahụ. Ọ bụrụhaala na Apple Watch gị nwere ohere nchekwa dị karịa karịa nke mmelite watchOS, mmelite ahụ ga-enwe ike ịwụnye.
Iji lelee ole ohere nchekwa ị nwere fọdụrụ na Apple Watch gị, gaa ngwa Watch na iPhone gị wee pịa General -> Ojiji na Apple Watch gị. N'elu menu a, ị ga-ahụ ego ole nchekwa dị na Apple Watch gị.
Lelee Maka Okwu Apple Server
Enwere obere ohere na ndị sava Apple dara n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ Apple Watch niile na-anwa imelite na nche kacha ọhụrụ n'otu oge. Nke a na - eme naanị na ụbọchị ole na ole nke ngwanrọ ngwanrọ, dị ka mgbe Apple wepụtara iOS 11 maka iPhone, iPad, na iPod na Septemba 2017.
Apple nwere ihe zuru ezu peeji nke ọnọdụ nke ahụ ga-eme ka ị mara ma ọ bụrụ na sava ha na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị hụ ọtụtụ akara uhie na ibe a, enwere ike inwe nsogbu na sava Apple. Ọ bụrụ na enwere ihe nkesa, Apple maara nsogbu ahụ ma ha na-edozi ya ka ị na-agụ isiokwu a.
Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala gị na Apple Watch
Ọ bụrụ na Apple Watch gị anaghị emelite, enwere ike inwe nsogbu ngwanrọ na-akpata nsogbu. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ site na usoro niile dị n'elu, oge eruola ka ị gbalịa ihichapụ ọdịnaya niile na ntọala Apple Watch gị.
iphone na -akpọ oku na 2018 nke ya
Mgbe ị na-eme nzọụkwụ a, a ga-emezigharị ntọala Apple Watch gị niile na nrụpụta ụlọ ọrụ na ọdịnaya gị niile (egwu, foto, wdg) ga-ehichapụ kpamkpam. Ọ ga - adị ka ị wepụrụ Apple Watch gị na igbe maka oge mbụ.
Mara: Mgbe ihichapụ ọdịnaya niile na ntọala gị niile na Apple Watch, ị ga-ejikọ ya na iPhone gị ọzọ.
Mepee Ntọala ngwa na Apple Watch ma pịa General -> Tọgharia -> Ghichaa ọdịnaya na ntọala niile . A ga-akpali gị ịbanye passcode gị, wee pịa Ghichaa Ha niile mgbe njikere nkwenye gosipụtara.
kedu ihe kpatara m ji enwe wheel na -atụgharị na iphone m
Mgbe ịmechara Apple Watch gị na iPhone ọzọ, gbalịa imelite watchOS site na ịga na General -> Nwelite ngwanrọ na ngwa iPhone's Watch. Ọ bụrụ na ị hụ ozi na-ekwu 'Sọftụwia gị dị ugbu a', Apple Watch gị emelitere onwe ya n'oge usoro nrụpụta.
Gaa Leta Locallọ Ahịa Apple mpaghara gị
Ọ bụrụ na ihichapụ ọdịnaya niile na ntọala niile na Apple Watch gị, mana ọ naghị emelite, mgbe ahụ ị ga-achọ ka onye ọrụ Apple lee ya anya. Enwere ohere mpi na-ejikọ iPhone gị na Wi-Fi ma ọ bụ antenna nke na-ejikọ Apple Watch gị na iPhone mebiri. Tupu ị gawa, anyị na-akwado gị ịhazi oge ya mere, ịkwesighi iguzo gburugburu Apple Store n’ehihie niile.
Gị Apple Watch emelitere!
’Ve meelarịrị ihe nchegharị nke ọma na Apple Watch gị! Anyị nwere olile anya na ị ga-ekerịta edemede a na soshal midia ka ị nwee ike ịkụziri ndị ezinụlọ gị na ndị enyi ihe ị ga-eme mgbe Apple Watch ha agaghị emelite. Enwere ike ịhapụ ajụjụ ọ bụla gbasara watchOS na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a!